Izindaba - I-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. Iwine Isihloko Esihlonishwayo Samabhizinisi Ase "Top Ten (Plastic Sheet) In China'S Light Industry Industry Industry"
Ishidi eqinile eqinile (indawo ecwebezelayo)
Ishidi eqinile eqinile (indawo embossed)
Ishidi eqinile eqinile (i-fiber isifihliwe)
Ishidi eliqinile le-PP (cishe cishe umlilo)
Ishidi eqinile eqinile (i-UV igxilisiwe)
Ishidi eliqinile le-PPH
Induku eyi-PVC eyindilinga
Induku eyisikwele ye-PVC
Induku yokushisela ye-PVC
Induku yokushisela ye-PP
Induku ye-HDPE yokushisela
Isiteshi se-PP U
Ipayipi lokuhambisa amanzi le-PVC-M
Amapayipi amanzi e-UPVC nepayipi lokunisela
Ipayipi likagesi le-UPVC
Ipayipi lamakhemikhali le-UPVC
Ipayipi lokuhambisa amanzi le-UPVC
Ipayipi lokuhambisa amanzi le-HDPE
I-HDPE yokuhambisa amanzi nepayipi lokunisela
HDPE odongeni kabili ipayipi lukathayela
HDPE kwaqinisa Kuvunguza ipayipi lukathayela ngebhande lensimbi
PVC ipayipi nokufakwa
I-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. Iwine Isihloko Esihlonishwayo Samabhizinisi Ase "Top Ten (Ishidi Leplastiki) Emkhakheni Wokukhanyisa wePulasitiki waseChina"
Emkhakheni wezinkampani eziyishumi eziphezulu embonini yamabhizinisi alula eChina, iBaoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. iwine isihloko sokuhlonishwa kwamabhizinisi emikhakha yamapulasitiki emikhakha yezimboni ephezulu kakhulu yaseChina (amaphepha epulasitiki). Kusukela yasungulwa ngo-1997, uLida Plastic ubelokhu ebambelela njalo endleleni yokwenza umkhakha namandla avela emikhiqizweni. Ngokucwaninga okuthuthukayo kwezobuchwepheshe nentuthuko, ukulawulwa kwekhwalithi eqinile, imodi yokumaketha eyingqayizivele, insizakalo ephelele yokuthengisa emva kokuthengisa yaziwa ekhaya nakwamanye amazwe, Singabachwepheshe benkampani yokukhiqiza ocwaningweni nasekuthuthukisweni. Ngokuzayo sizoqhubeka nokusebenzisa intshiseko, ubuqotho, amandla kanye nabangane abavela kuzo zonke izizinda zokuphila ndawonye ukuze sakhe ikusasa elingcono, siqhubekele phambili.
Selokhu yasungulwa ngo-1997, i-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. idale isiko lokuqhubeka komkhiqizo nokuthuthukiswa kwensizakalo, futhi kungekudala yavela yaba yinkampani eyaziwa umhlaba wonke. Siqhubeke nokwethula ezindaweni zokukhiqiza ezithuthukisiwe zakwamanye amazwe futhi kuze kube manje sinezindawo ezingama-20 ezithuthukisiwe zamashidi, izikhungo ezingama-35 zamapayipi neminye imikhiqizo yepulasitiki. Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-230000, futhi umkhiqizo wonyaka udlula amathani angama-80000. Yithina kuphela inkampani esahlela futhi senza indinganiso kazwelonke yemikhiqizo yephepha lepulasitiki.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi emkhakheni wamakhemikhali, ubunjiniyela, i-elekthronikhi, ukudla, ukwelashwa, amaphrojekthi wokuhambisa amanzi namapayipi, izinto zokwakha, ukuchelela epulazini, ulwandle izinkwa, ukuxhumana ngogesi nezinye izimboni.
Izinga lemikhiqizo nezinsizakalo zethu lilinganiswa ngesisekelo samazinga nemihlahlandlela kazwelonke neyamazwe omhlaba. Ngaphandle kokwenza ukuhlolwa okuphelele ngaphakathi, sithole izitifiketi eziningi zangaphandle, isib. sithathe i-ISO9001 International Quality Management Accredication yekhwalithi ngokungathi sína. Futhi ngo-2003 ithole isitifiketi se-High-tech Enterprise, yabe isidlulisa isitifiketi sokukhululwa komkhiqizo ekuhlolweni kwekhwalithi yokuqapha ngo-2007. Sathola isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo kwe-ISO14001 ngo-2008. kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo kwemikhiqizo nezinqubo. Kuze kube manje imikhiqizo ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-30, njengeMelika, iNgilandi, iCanada, i-Australia, iSingapore, iMalaysia, iThailand njalonjalo. Siphumelele ukulinganisa okuhle kuwo wonke amaklayenti ethu ngemikhiqizo yokusebenza ephezulu, amanani entengo kanye nensizakalo yokwazisa.
Ikheli: No.316 Pingan West Street, Shunping County, Baoding City, Hebei, China 072250